Chi tiết cách trồng dưa lưới đúng kỹ thuật, năng suất cao | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Chi tiết cách trồng dưa lưới đúng kỹ thuật, năng suất cao | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
1 I-Cantaloupe sisiqhamo esidumileyo esineenzuzo ezininzi zempilo. Inqaku elilandelayo lingathanda ukwabelana banzi ngendlela yokutyala ikhantaloupe ngokufanelekileyo kunye nesivuno esikhulu!
1.1 Ekuqaleni Amanqaku ngaphambi kokutyala i-cantaloupe ekhaya
1.1.1 Khetha inyanga efanelekileyo yokutyala i-cantaloupe
1.1.2 Khetha imbewu yemelon
1.1.3 Khetha indawo yokutyala
1.1.4 Ukulungisa umhlaba wokutyala
1.1.5 Lungisa iimbiza ukutyala ivatala
1.2 2 Uyikhulisa njani ikhantaloupe kwithafa
1.2.1 Iindlela zokukhulisa iimelon kwithafa
1.2.2 Iindlela zokunyamekela i-melon
1.3 3 Indlela yokulima ivatala ngaphandle
1.3.1 Iindlela zokulima iivatala ngaphandle
1.3.2 Iindlela zokunyamekela i-melon yangaphandle
1.4 4Imibuzo enxulumeneyo malunga nendlela yokukhulisa i-cantaloupe
1.4.1 Indlela yokwahlula iintyatyambo zamadoda nabasetyhini?
1.4.2 Ixesha elifanelekileyo lokuhambisa iintyatyambo
1.4.3 Indlela yokucoca iintyatyambo ze-melon?
I-Cantaloupe sisiqhamo esidumileyo esineenzuzo ezininzi zempilo. Inqaku elilandelayo lingathanda ukwabelana banzi ngendlela yokutyala ikhantaloupe ngokufanelekileyo kunye nesivuno esikhulu!
ICantaloupe yimveliso yezolimo enexabiso eliphezulu kwezoqoqosho. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu onolwazi malunga nokukhulisa i-cantaloupe ngokufanelekileyo kunye nesivuno esikhulu. Ke ulindele ntoni, musa ukubhekisa ngoko nangoko kulwazi olungezantsi ukuze ufumane amava angakumbi ekukhuleni kwecantaloupe, ngexesha lonyaka levatala elinentabalala.
Ekuqaleni Amanqaku ngaphambi kokutyala i-cantaloupe ekhaya
Iimelon ezityalwe ngexesha elifanelekileyo ziya kunika izivuno eziphezulu
Ukuze ube necantaloupe echumileyo eneziqhamo ezininzi, xa ukhulisa i-cantaloupe ekhaya, kufuneka uqaphele oku kulandelayo:
Khetha inyanga efanelekileyo yokutyala i-cantaloupe
Ixesha elifanelekileyo lokuba utyale ivatala ukusuka ngoFebruwari ukuya kuSeptemba. Noko ke, elona xesha lifanelekileyo isengala maxesha mabini alandelayo: Februwari noMatshi, xa utyala ngeli xesha, uya kuvuna ekupheleni kuka-Aprili okanye ngoMeyi, Agasti, Septemba kwaye ixesha lokuvuna kuNovemba-Disemba.
Musa ukutyala ikhantaloupe kwimozulu ebandayo Ngenxa yokuba umthi unokuchaphazeleka kwizinambuzane kunye nezifo, izinga lokusinda kunye nokukhula alikho phezulu
Khetha imbewu yemelon
Xa ukhetha imbewu yecantaloupe kufuneka khetha imbewu ye-F1 ecocekileyoOlu hlobo lwembewu luya kunika izinga eliphezulu lokuntshula kwaye livelise iziqhamo ezinkulu eziswiti. Sukukhetha ukuthenga imbewu exutyiweyongaphandle kophawu olucacileyo le mbewu inezinga eliphantsi lokuntshula kwaye isiqhamo asisibi.
Khetha indawo yokutyala
Imelon ngokwendalo sisityalo esithanda ukukhanya, ke wena Izityalo kufuneka zityalwe kwiindawo eziqaqambileyo, eziphangaleleyo. Unokusebenzisa iyadi phambi kwendlu, kwi-terrace okanye kwi-balcony. Musa ukutyala imithi kwindawo enomthunzi, kwiindawo ezimxinwa umthi uya kuba nobunzima ekukhuleni nasekuveliseni isiqhamo esincinane.
I-Cantaloupe ngokwendalo sisityalo esithanda ukukhanya, ke kuya kufuneka uyityale kwiindawo ezinokukhanya okuninzi.
Ukulungisa umhlaba wokutyala
Ukuze i-melon ibe neemeko ezintle zokukhula, kufuneka ubeke ingqalelo Ukukhetha umhlaba wokulima ivatala kufuneka ube nobutyebi bezondlo, ubenemingxuma kwaye kube lula ukukhupha amanzi, njenge: Umhlaba ococekileyo oxutywe ne-vermicompost, i-vermicompost, i-coir. Ungathenga umhlaba okhulisa imelon kwiivenkile zebonsai.
Ukongeza, ungaxuba owakho umhlaba wokukhulisa i-cantaloupe ngoku: Thatha i-honeycomb slag, ucwilise emanzini imini nobusuku. Emva kweeyure ezimbalwa, utshintshe amanzi kwakhona ukususa ukungcola kumalahle. Emva koko, ukhupha amalahle kwaye udibanise kwizinga le-40% yomhlaba, wongeza i-40% ye-slag yamalahle, kwaye ungeze i-20% ye-rice husks ukudibanisa kakuhle.
Lungisa iimbiza ukutyala ivatala
Unga khetha ibhokisi yogwebu okanye isitya seplastiki ukuze ukhulise iivatalakodwa kufanele kuphawulwe kufuneka ugqobhoze umngxuma emazantsi ebhokisi ukwandisa umthamo wamanzi, ukudala umoya kunye nokutshintsha i-oksijini emhlabeni, ukuze izityalo zingabi namanzi kwaye zikhule kakuhle. Inceda izityalo ukuba zingagalelwa ngamanzi, kwaye zikhule kakuhle.
2 Uyikhulisa njani ikhantaloupe kwithafa
Iimeloni ezityalwe kwi-terrace, ukuba zinyamekelwe kakuhle, ziya kunika iziqhamo ezinkulu, ezinobumnandi
Iindlela zokukhulisa iimelon kwithafa
Emva kokuba uzilungiselele ngokupheleleyo iimbewu, iimbiza, kunye nomhlaba wokukhulisa i-cantaloupe, inyathelo lokuqala ekufuneka ulithabathe xa utyala i-cantaloupe kwi-terrace kukuhlwayela.
Wena kuqala Gxuma imbewu emanzini afudumeleyo (umlinganiselo: 2 ukubilisa + 3 kubanda) kwiiyure ezi-4-5, emva koko ufukamele imbewu kwilaphu elimanzi. Xa imbewu inokwahlukana okuncinci, ukhupha imbewu ukuba ifukamele.
Phawula: Ukuba uthenga imbewu yohlobo lwe-F1, akukho mfuneko yokuba uthathe eli nyathelo lokufukama imbewu, kodwa unokuyisa kwindawo yokugcina abantwana.
Emva koko, uzisa imbewu kwi-nursery elungisiweyo, igqume ngomhlaba obhityileyo phezulu, amanzi ukugcina imbewu ifumile. Gcina i-incubator kwindawo epholileyo, kude nelanga elithe ngqo. Kuphela malunga neentsuku ezi-2-3 emva koko uya kubona imbewu intshulangeli xesha ungakulibali ukunkcenkceshela ngokwaneleyo ukuba isityalo sikhule, nje Kuthatha malunga neentsuku ezi-7-10 ukuba isityalo sivelise amagqabi okwenene amabini.
Ukutyala umntwana we-cantaloupe
Emva koko Malunga neentsuku ezili-10-12, isityalo siye savelisa amagqabi amabini aphambili. Ngeli xesha, uya kubeka izithole embizeni. Ugrumba umngxuma omncinci embindini wembiza, uyisuse ngobunono imbiza yenursery kwaye ubeke izithole kunye neembiza, ugqume ngomhlaba, udibanise umhlaba ujikeleze isiseko kwaye unkcenkceshele izityalo kwaye ubeke izityalo kwindawo enomthunzi. ukunkcenkceshela amaxesha ama-2 ngosuku ukuqinisekisa ukufuma kwesityalo.
Iindlela zokunyamekela i-melon
Isiqhamo seCantaloupe sikhulu kwaye asilunganga
Ngexesha lokutyala, awudingi ukunkcenkceshela kakhulu, de isityalo sibe namagqabi angama-3-4, kufuneka unkcenkceshele malunga ne-0.5 ilitha – 0.7 ilitha zamanzi ngesityalo / ngosuku kuxhomekeke kwiimeko zemozulu, ukuba kushushu, unokunkcenkceshela kancinci, kodwa ukuba kuyanetha, unokunkcenkceshela kancinci, ngoko ke ukunkcenkceshela kufuneka kube ngendlela yokugalela ukuphepha izityalo ezaphukileyo nezityumkileyo.
Ukufakela isichumiso kwicantaloupe
Ukuze umthi ukhule kwaye uvelise iziqhamo ezininzi, kufuneka ngokuqinisekileyo uchumise ukongeza izondlo zomthi. Ngokuxhomekeke kwizigaba ezahlukeneyo, isixa sesichumisi sikwahluka.
Xa umthi unamagqabi ama-3-4, unkcenkceshela isityalo ngenitrogen ukunceda isityalo ukuba sikhule ngokukhawuleza kwaye solule isiqu. Nge 1/2 yekomityi yeProtein (ngekomityi yeti) uyixuba ne-7-8 yeelitha zamanzi kwaye unkcenkceshele izityalo.
Xa umthi uvelise amagqabi amaninzi kunye namathupha amaninzi amancinci avela kwaye wena Xuba kumlinganiselo we 3 Nitrogen: 1 Phosphorus: 2 Potassium ne 7-8 ilitha zamanzi, unkcenkceshela yonke imihla ngezityalo. ukuze isityalo sifumane izondlo ezaneleyo ukuze sikhule.
Xa isiqhamo esincinci siqala ukuntshula, kufuneka unyuse inani le Phosphorus ukuya malunga ne ⅔ ikomityi ukwenza isiqhamo sibe sininzi kwaye sikhule ngokukhawuleza.
Xa ubona umthi onamagqabi ama-5-6, uqhubela phambili wenze i-trellis yesityalo esinyukayo. Ukuba utyala kufuphi nocingo lwebalcony, ungasebenzisa ucingo lwemidiliya, kwaye ukuba awunacingo, ungasebenzisa izibonda ze-bamboo, iintonga zokhuni ukwenza i-trellis yeevatala.
Ukuba uceba ukutyala ixesha elide, unokwenza i-iron truss ukuze ukhule amaxesha amaninzi onyaka.
Kwimeko ukuba indawo okhulela kuyo i-melon ineenyosi ezimbalwa kunye namabhabhathane, kwinqanaba leentyantyambo, kufuneka uncede izityalo ukuba zikhuphe i-pollinate ukuze zibe nesantya esiphezulu seziqhamo.
Ukuvuna nokugcina ivatala
Emva kweenyanga ezi-3 ukusuka kumhla wokutyala, kufuneka uvune ivatala. Ngaphambi kokuvuna, kufuneka uyeke ukunkcenkceshela iintsuku ezingama-5-7 ukuze i-melon ibe crispy kwaye ibe mnandi. Emva kokukhetha, yiyeke iintsuku ezi-2-3 ukuze ibe mnandi kwaye ibe mnandi
3 Indlela yokulima ivatala ngaphandle
Iindlela zokulima iivatala ngaphandle
Gxuma kwaye uhlwayele imbewu yemelon
Ukhetha imbewu elungileyo, uze ucwilise imbewu emanzini afudumeleyo malunga neeyure ezingama-4-5, emva koko ubeke imbewu ngelaphu ukufukamela usuku olu-1 ukwahlula idyasi yembewu.
Hlwayela imbewu yevatala
Ngaba ukulungele ukutyala imbewu ngomhlaba? Xuba umgquba okanye ivermicompost ukuqinisekisa ukuba kukho isondlo esaneleyo sokukhula kwezityalo. Emva kokuba imbewu oyifukamileyo ikrazukile, faka imbewu kwindawo yokugcina abantwana, ugqume ngomhlaba obhityileyo namanzi rhoqo ukuqinisekisa ukufuma ukuze imbewu intshule.
Kuthatha malunga neentsuku ezi-2 kuphela ukuba imbewu intshule, emva kweentsuku ezi-8-10, isityalo siya kuqalisa ukunika amagqabi okwenene ama-2.
Xa umthi unamagqabi okwenene, ubeka umthi kwisitya esikhulu kunye nomngxuma ongaphantsi ukuze ukhuphe amanzi angcono, ugweme ukukhutshwa kwamanzi.
Xa isityalo sinamagqabi amakhulu angama-2-3, ubeka isityalo kwibhokisi enkulu Inokuba yi-styrofoam okanye i-emele yokutyala, kodwa khumbula ukugqobhoza imingxuma emazantsi ebhokisi ukuze ukhuphe amanzi angcono, ukunqanda ukugcwala kwamanzi. Qaphela ukuba umhlaba wokulima ivatala kufuneka ukhethe umhlaba okhululekileyo, otyebileyo ngezondlo.
Yenza umngxuma onzulu, emva koko ucande ingxowa yenayiloni kwaye ubeke imbiza kumngxuma osele ugrunjwe ngaphambili, ugcwalise isiphunzi ngomhlaba, kwaye usigqume ngeendiza, i-wood humus, nengca eyomileyo ejikeleze isiseko ukugcina isityalo sifumile.
Emva kokutyala izithole, kufuneka Ukunkcenkceshela amaxesha ama-2 ngosuku kwaye unokudibanisa kunye nekhava yomthi ukuze isityalo singabonakali kwilanga elinamandla.
Iindlela zokunyamekela i-melon yangaphandle
I-Cantaloupe kufuneka inkcenkceshelwe yonke imihla ukuqinisekisa ukukhula kokufuma, elona xesha lilungileyo lokunkcenkceshela isityalo kusekuseni nangokuhlwa.
I-Cantaloupe kufuneka inkcenkceshelwe yonke imihla ukuqinisekisa ukukhula kokufuma
Ukongeza ekukhetheni umhlaba otyebileyo ngezondlo zokulima iimelon, kufuneka wongeze izichumisi zeNPK ukuze izityalo zivelise iintyatyambo ezininzi kunye nesantya esiphezulu sokumiselwa kweziqhamo. Izityalo ezinamagqabi ama-4-5 kufuneka zongeze i-Potassium, i-Nitrogen, kwinqanaba lokukhula kwamagqabi, kufuneka amanzi e-nitrogen ehlanjululweyo.
Ukusukela kwisigaba sokuhluma ukuya kusuku lokuvuthwa malunga nenyanga enye, emva koko uchumisa i-NPK, i-Potassium kunye ne-Nitrogen ngeveki ukuya kwiintsuku ezili-15 phambi kokuvuna, emva koko uyeke ukuchumisa.
Xa umthi unamagqabi okwenyaniso angama-2-3, uqhubela phambili ukuthena amagqabi kwaye ucinezele phezulu, uqhubeka usika amagqabi de umthi ukhule ube ngamagqabi ukusuka kwayisi-8 ukuya kwali-10, uze ulishiye elo sebe. Kwinqanaba xa umthi unamagqabi angama-22-25, kufuneka unqumle phezulu ukuze umthi ugxile ekukhuliseni iziqhamo.
Phawula: Ukuba isiqhamo sininzi, kufuneka usinqumle isiqhamo, ushiye iziqhamo ezi-2-3 kuphela ngomthi, kuba i-melon inkulu kwaye inzima.
Yenza i-trellis yeevatala
Xa isityalo siqalisa ukuvelisa amagqabi okwenene ama-4-5, kufuneka wenze i-trellis yecucumber, ungenza i-trellis emva koko usebenzise intambo yenayiloni ukubopha umthi kancinci kwi trellis, kungenjalo ungenza isibonda ukhukhamba.
4Imibuzo enxulumeneyo malunga nendlela yokukhulisa i-cantaloupe
Indlela yokwahlula iintyatyambo zamadoda nabasetyhini?
intyatyambo yabasetyhini: Iintyatyambo ezimazi zikhula kwi-axils yamagqabi kwaye zinentyatyambo enye kuphela. Kukho iimbiza zeentyatyambo ezincinci phantsi kwamagqabi, le nxalenye xa i-pollinated iya kukhula ibe sisiqhamo.
Intyatyambo yobudoda: Iintyatyambo zobudoda zikhula kumasebe axillary, ikhwapha ngalinye lineentyantyambo ezininzi. Akukho bhalbhu yeentyatyambo phantsi kweentyatyambo zamadoda, iintyatyambo zesilisa zifutshane kuneentyatyambo zemazi.
Iintyatyambo kufuneka zifakwe ipoleni ngo-6am – 8am
Ixesha elifanelekileyo lokuhambisa iintyatyambo
Iintyatyambo kufuneka zifakwe ipoleni 6am – 8am, xa intyatyambo yemazi ijika ibe tyheli Kwaye ukuba kukho iimpawu malunga nokuqandusela, kuyimfuneko ukukhupha ipoleni ngokukhawuleza.
Indlela yokucoca iintyatyambo ze-melon?
Wena ukusika iintyatyambo zobudoda, nqumla amagqabi Hamba, zishiye isitameni zegolide.
Kamva, Jikelezisa i-stamen yenkunzi ujikeleze intyatyambo yemazi. Ungasebenzisa ibrashi okanye iswab yomqhaphu ukutshayela umungu ukusuka kwiintyatyambo zamadoda ukuya kwabasetyhini. UCanzibe Sebenzisa iintyatyambo ezi-2, ezi-3 zobuduna kwintyatyambo eyimazi ukuqinisekisa ukusasazwa ngempumelelo.
Phawula: I-pollinate ukusuka kwi-9th leaf axils – i-axils yeqabunga le-15 ukufezekisa iziphumo ezilungileyo!
Kutshanje, ukwabelana malunga nobuchule obuchanekileyo bokukhulisa i-cantaloupe kunceda umthi uvelise isiqhamo esimnandi nesinencindi. Ukuba uceba ukukhulisa imelon, musa ukukubetha ngoyaba ukwabelana ngoku!
Khetha ukuthenga iziqhamo ezomisiweyo ezithengiswa eBach Hoa XANH: